Nepal Dayari | कठै ! छोरो जन्माएर राम्रोसंग छोरोको अनुहार हेर्न न पाउदै आमा अ स्ताइन्, श्रीमान र परिवारको रु दा रु दा यस्तो हालत भयो (भिडियो हेर्नुस्)
कठै ! छोरो जन्माएर राम्रोसंग छोरोको अनुहार हेर्न न पाउदै आमा अ स्ताइन्, श्रीमान र परिवारको रु दा रु दा यस्तो हालत भयो (भिडियो हेर्नुस्)
पुष २०, २०७८ मंगलबार ३८० पटक हेरिएको
सर्लाही जिल्लाको इस्वरपुर नगपालिका ५ कि रमा घिमिरेको छोरा जन्माएको ५ दिन नबित्तै मृ’त्यु भएको छ । टिकटकमा निकै देखिने रमाको नि’धन भए पछि थुप्रैले शो’क ब्यक्त गरेका थिए । यसै घ’टना र उनको जीवनि बारे बुझ्न अहिले मिडियाकर्मी भोजराज उनको घरमा पुगेका छन । उनको घरमा पुग्दा सबै शो’कमग्न अवस्थामा भेटिएका थिए । रमाका श्रीमान दिपेश आफुलाई समाल्न सकि रहेका थिएनन । उनिहरुका जेठा छोरा ९ वर्ष पुगेका छन्। भने अर्का कान्छा छोरा जन्माएर रमा बि’दा भइन् ।
१० वर्ष अघि रमा र दिपेशको बिबाह भएको थियो । रमाको माइतीघरमा पनि रमा एक्लि सन्तान हुन । आफ्नो बाबू आमाको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी पनि रमाकै थियो । घर परिवारको सल्लाहमा नै रमासगँ आफ्नो मागी बिबाह भएकी दिपेशले बताए । तर आफुहरुको चिनजान र बोलचाल भने अगाडि देखि नै रहेको दिपेशले बताए । आफुहरुले प्रेम सम्बन्धमा रहे पछि घरपरिवारको सल्लाहमा मागी बिबह गरेको उनको भनाई छ । अहिले ५ दिनको बच्चाको बिचल्नी भएको छ ।
रमा आफुसगं नरहे पछि आफ्नो घर लथालिङ्ग भएको दिपेशको भनाई छ । बच्चाको जन्म दिएर सबैलाई खुशी दिएकी ३० वर्षीय रमा केही दिनमा नै सबैलाई रु’वाएर गएको रमाकी सासुले बताईन । आफुले कहिल्यै पनि रमालाई बुहारीको ब्याबहार नगरी छोरी जस्तै गरेको उनको भनाई छ । रमाको माइतिमा पनि कोहि नभएकोले आफुले छोरा बुहारिलाई उतै गएर बस भनेर भन्दै आएको रमाकी सासू बताउँछिन । आफ्नो ५ भाइ छोरा भएको तर सम्धी सम्धिनिको त छोराछोरी जे भने पनि रमा मात्र भएकोले आफुले कहिल्यै छोरा बुहरिलाई उनिहरुबाट टाढा राख्न नखोजेको उनको भनाई छ ।
माइतिघरमा आफू एक्लि संतान भएकोले रमाले आफ्नो जेठो छोरालाई उतै राखिदिएकी थिइन । जेठो छोरा मावली मै बसेर कक्षा ३ मा पढ्दै गरेका थिए । रमा दुई संतान जन्माउने र एउटा माइतिमै राख्ने एउटा आफुसगँ राख्ने बताउने गरेको दिपेशको भनाई छ । त्यही कारणले पनि अर्को बच्चा जन्माएको दिपेशले बताए । आफू घर एक्लो संतान भएकोले बाबा आमाको हेरचाह गर्ने कोहि नभएको भन्दै रमाले दुई वटा संतानको इच्छा गरेकी थिइन् । आफुले रमाको हर इच्छा पूरा गरेको दिपेश बताउँछन ।
आफू १ वर्ष जति बिदेश बस्दा रमाको घर छेउको साथी मार्फत रमासगँ भेट भएको दिपेश बताउँछन । पछि सामान्य कुरा भए पछि साथी मार्फत नै भेट भएको दिपेश बताउँछन । तर त्यो बेला रमाले बोल्न पनि नमानेको उनको भनाई छ । आफू घरको एक्लो संतान भएकोले घरको सम्पुर्ण जिम्मेवारि आफ्नै भएकोले आफू त्यसरी नबोल्ने रमाले बताएको दिपेश सुनाउँछन । आफुले पनि रमाको जिम्मेवारीमा साथ दिने बताए पछि बिबाह गर्ने कुरा अगाडि बढेको दिपेशले बताए ।